भारतमा बढ्दै कोरोना, कति पुग्यो मृतक र संक्रमित संख्या ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
भारतः भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । बुधबार १८ जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ ।
हाल भारतमा कोरोना संक्रमित संख्या ५ हजार ९ सय १९ पुगेको छ । त्यहाँ बुधबार मात्रै ५ सय ६५ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस को हुन् आज कोरोना देखिएका तीन संक्रमित ?
संक्रमितमध्ये ५ सय ६ जना निको भइसकेका छन् भने अन्यको अवस्था सामान्य रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण ६ हजार बढीले ज्यान गुमाएका छन् । बुधबारदेखि बिहीबार बिहानसम्मको तथ्याङकअनुसार ६ हजार ३ सय ६९ को मृत्यु भएको छ ।
मंगलबारको तुलनामा बुधबार मृत्युदर घटेको छ । मंगलबार ७ हजार ३ सय को मृत्यु भएको थियो भने बुधबार ६ हजार ३ सयजनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८८ हजार ४ सय ५ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतले सत्य स्वीकार्नैपर्छ, सीमा विवादमा चीनलाई मुछ्नु अनावश्यकः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
त्यस्तै, बुधबार ८२ हजार नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या बढेर १५ लाख १३ हजार पुगेको छ । संक्रमितमध्ये करिब ३ लाख ३० हजार निको भएका छन् भने १० लाख ९५ हजार उपचाररत छन् । उपचाररथमध्ये ४८ हजारको अवस्गा गम्भीर छ ।
याे पनि पढ्नुस को हुन् आज थपिएका १० कोरोना संक्रमित ?
ट्याग्स: कोरोना, भारत